‘लगेज’ चीनमा, मान्छे नेपालमा ! – Hotpati Media
‘लगेज’ चीनमा, मान्छे नेपालमा !
१५ पुष २०७३, शुक्रबार १३:३१ मा प्रकाशित (4 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ४ मिनेट
काठमाडौं – संस्कृति नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही २३ डिसेम्बरमा अष्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्कंदै थिए । अष्ट्रेलियाको क्याथे प्यासिफिक एयरलायन्सबाट उनी हङ्कङमा उत्रे । ट्रान्जिटमा एकघण्टा रोकिएर उनी ड्रागन एयरलायन्समार्फत नेपाल फर्किए ।
मन्त्री त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिए । तर, उनको लगेज आइपुगेन । “एक घण्टासम्म प्रतीक्षा गरेपछि पनि व्याग आइपुगेन,” मन्त्री शाहीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “त्यसको दुईदिन पछि मात्र सोही एयरलायन्सबाट ब्याग आइपुग्यो ।” मन्त्री अष्ट्रेलियामा भएको ग्रान्ड नेपाल फेस्टिबेलमा सहभागी भएर नेपाल फकिएका थिए ।
त्यस्तै, २७ डिसेम्बरमा कोरियाबाट नेपाल फर्किने क्रममा दैलेखका कलमबहादुर खड्का चाइना साउदन एयरलायन्समार्फत नेपाल आइपुगे । उनको चीनको गोन्जाओमा ट्रान्जिट एक घण्टा थियो । नेपाली समयअनुसार २७ डिसेम्बर दिउँसो १२ बजे कोरियाको सोलबाट उडेका उनी दिउँसो ३ बजे गोन्जाओ आइपुगे । त्यसपछि सोही एयरलायन्सको अर्को उडानबाट ४ बजे नेपालका लागि उडेका खड्का राती १० बजे एयरपोर्ट आइपुगे । तर, सबै साथीभाईको कोसेली, अन्य आफ्ना सामानसहितको लगेज आइपुगेन ।
“राती दशबजे एयरपोर्ट ओर्लिए । त्यसपछि लगेज कुरेर साढे ११ बजेसम्म बसेँ । त्यसपछि बल्ल तपाईँको लगेज उतै छुटेको खबर आयो,” उनले भने, “त्यसपछि भोलीपल्ट बिहानै लगेज लिन गएको त बेलुका त्यही समयको फ्लाइटमा पो आउने रैछ । त्यो कुरा हिजो नै भनिदिएको भए म सोहीअनुसार आउँथे । मलाई दुई पटक धाउनुपर्‍यो ।”
यस्ता समस्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थिलमा दैनिक रुपमा आउने गर्छन् । यस्तो किन हुन्छ भनेर विमानस्थलका कर्मचारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ यस्तो थियो, “मन्त्री ज्यू कै लगेज छुट्यो । अरुको के कुरा गर्नु ? लगेज छुट्ने समस्या विश्वभर हुन्छ । तर, अन्य देशमा एयरलाइन्सले लगेज छुटायो भने पीडितले तुरुन्तै उजुरी गर्छ र क्षतिपूर्ति पाइहाल्छ । हाम्रोमा पीडितलाई उजुरी गरे क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन ।”
लगेज छुटे ४० अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थिलका महानिर्देशक देवानन्द उपाध्यायका अनुसार ट्रान्जिट वा सम्बन्धित देशमा लगेज ‘मिसप्लेस’ भएमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । “ट्रान्जिट समय कम हुँदा लगेज छुट्ने समस्या हुन्छ । यो नेपालमा मात्रै होइन,” उनले भने , “तर, कुन एयरलायन्सबाट आउँदा छुटेको हो । उजुरी गर्‍यो भने यात्रुले ४० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।”
दुई दिन हङकङमा लगेज छुटेका मन्त्री शाहीलाई ड्रागन एयरलायन्सले ४० डलर लिन आउनुस् भन्दै फोन गर्‍यो । “मलाई ४० डलर लिन आउनुस् भन्दै फोन आएको थियो । म लिन गइनँ,” उनले भने, “मैले अब उप्रान्त यस्तो नहोस् भनेर खबरदारी गरेको छु । मसँग पैसा धेरै भएर नगएको होइन । उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन खोजेको हुँ ।”तर, यस्तै समस्या भोगेका कलम खड्कालाई तीन दिन भइसक्यो एयरलायन्सले फोन गरेको छैन ।
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगेज छुटेका पीडितलाई होटल खर्च र फेरि एयपोर्ट आउनका लागि ट्याक्सी खर्चका लागि हो । तर, धेरैलाई क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नहुँदा अर्को दिन गएर लगेज लिन्छन् अनि घर फर्कन्छन् । “छुटेको लगेज लिन एउटै एयरलान्सको अर्को उडान कुर्नुपर्छ । कुनै एयरलायन्सको त दुई÷तीन दिनमा मात्रै अर्को उडान हुन्छ,” विश्वस्त स्रोतले भन्यो, “अनि कति दिनसम्म लगेज कुरेर बस्नु ?”
पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेलको झोलासमेत एयरपोर्टबाट हराएको थियो
लजेग छुटेको वा हराएकोमा उजुरी गर्नुपर्छ भनेर विमानस्थिलका कर्मचारीले पीडितलाई यथेष्ट जानकारी नै दिँदैन । कतिपयको एयरलान्सबाट त लगेज नै हराउँछ । यो समस्या पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ ।
२०५७ सालमा यसअघिका पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलको लगेज स्विजरल्याण्डबाट फर्कने क्रममा नेपालको एयरपोर्टमा हराएको थियो । “यो धेरै पहिलेको कुरा हो । तर, विमानस्थलमा लगेज हराउने समस्या अहिले पनि छ,” उनले भने, “मेरो अनुभवमा विमानस्थलका कर्मचारी, पुलिस र एयपोर्टमा सामान ओसारपोसार गर्ने कम्पनीका कर्मचारी मिलेमतोमा लगेज हराएको थियो ।”
एयरलायन्स, कर्मचारी, पुलिस र ठेकेदारको मिलेमतो
विमानस्थल भित्र नेपाल एयरलायन्सले विमानस्थिल भित्रको व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको छ । “विमानस्थल व्यवस्थापक उत्तररदायी नबन्दा यस्तो समस्या आएको हो,” पूर्व मन्त्री पोखरेलले भने, “चोरी हुने भनेको जहाजबाट ट्रलिमा राखेर कन्टेनरसम्म ल्याउने बेला हुन्छ । यसमा एक्सरे मेसिनमा बसेका कर्मचारी , पुलिस, लोडरको मिलेमतोमा झोला हराउने, तोडफोट गर्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय यात्रुलाई त घरै पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । अनि कहाँ उजुरी गर्ने ?”
यसरी लगेज नै हराउनेले महत्वपूर्ण सामान छ भने उजुरी गर्छन् । तर, खासै महत्वको सामान छैन भने छोडिदिन्छन् । “छुटेको हकमा कम मानिसलाई मात्र उजुरी गरे क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “उजुरी गर्नेको पनि सामान वा क्षतिपूर्ति आएपछि पीडितलाई जानकारी नगराई कर्मचारीले नै खाइदिन्छन् ।”
छुटेको सामान लिन झन्झट
छुटेको सामान लिन पनि पास लिएर जानुपर्छ । पास पाउन त्यति सहज छैन । झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा कतिपय लगेज लिन फर्केर आउँदैनन् । “महत्वपूर्ण सामान नहुनेहरू त पछि आउँदैनन् पनि । उनीहरूलाई यता आफन्तले घरजाने टिकट लिइसकेका हुन्छन् । कि लगेज छाड्नुपर्‍यो कि बस वा जहाजको टिकट छाड्नुपर्‍यो,” स्रोतले भन्यो ।
प्रायः एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, जेट एयरवेजमा लगेज छुट्ने र मिसप्लेस हुने समस्या भएको स्रोतले बतायो । “अरु देशमा लगेज छुट्यो कि यात्रुले तुरुन्त क्षतिपूर्ति दाबी गर्छन् । त्यसैले एयरलायन्सले सजक हुँदै छिट्टै लगेज ट्रान्सफर गर्छ,” स्रोतले भन्यो, “तर, नेपालमा एयरपोर्ट व्यवस्थापन नै भद्रगोल छ । यसले गर्दा एयरलायन्सले मतलब गर्दैनन् ।” यस्तो समस्या नेपाली यात्रुले मात्र नभई विदेशी पर्यटकले समेत दिनहुँ भोग्दै आएका छन् ।
पीडितलाई बाहिरै सोधपुछ गर्ने र सम्बन्धीत एयरलायन्सबाट क्षतिपूर्ति लिनसक्ने वातावरण एयरपोर्ट व्यवस्थापनले गरिदिन सक्ने स्रोतको भनाई छ । “एयरलायन्सले क्षतिपूर्ति दिन आलटाल गरे कारबाही गर्नेसम्मको प्रावधान आवश्यक छ,” स्रोतले भन्यो ।
जहाजबाट सामान बाहिर आउनै महाभारत
यात्रु एयपोर्टमा सुरक्षित अवतरण गरेपछि बाहिर उसको आफन्तले कुरिरहेका हुन्छन् भने उ भित्र आफ्नो सामान । सामान्यतया जहाज ग्राउण्डेड भएको आधा घण्टामा बाहिर निस्किसक्नुपर्ने हो । तर, नेपालको एयरपोर्टमा डेढ घण्टासम्म आफ्नो सामान आइपुग्दैन । कहिलेकाही त मन्त्री शाही र कमल खड्काको जस्तै ‘तपाईंको लगेज उतै छुटेछ’ भनेर खबर आउँछ ।
“हाम्रो एयरपोर्टमा जहाजबाट थोत्रा ट्याक्टरले सामान ल्याउँछ । त्यसपछि ट्रकले चेकिङ गर्ने ठाउँसम्म,” स्रोतले भन्यो, “एउटै साधनले ल्याउने भए सामान पनि सुरक्षित हुन्थ्यो । छिटो पनि हुन्थ्यो ।”